Accueil > Gazetin'ny nosy > Fanapahana karama: Mihantsy ny vahoka hirotaka ny fanjakana
Fanapahana karama: Mihantsy ny vahoka hirotaka ny fanjakana
Isam-bolana dia manangan-tsampona hatrany ity fanjakana entin’ingahy Hery Rajaonarimampianina ity. Miala tamin’ny zavatra iray tsy mety dia mamorona savorovoro hafa indray. Ny tena mahagaga dia ny avy amin’ny fitondram-panjakana hatrany no manao izany. Mahita ny halemen’ny Malagasy amin’ny fahantrana izy ireo ka manao izay tiany hatao. Niova marina ny Malagasy ankehitriny satria tsy afaka nanohitra ny zavatra tsy mety nataon’ny fanjakana intsony. Enga anie ka hitohy izany mba hiadanan’ny mpitondra fanjakana hifandimby eto.
Toa ny nilatsaham-baratra ireo mpiasam-panjakana manodidina ny 20 000 mahery manerana ny nosy rehefa nahita fa tsy tonga ny taratasy fandraisany vola. Tapaka nanomboka tamin’ity volana desambra 2017 ity ny karaman’izy ireo satria hono mpiasam-panjakana matoatoa.
Hatramin’ny lehiben’ny sampandraharaham-panjakana sy ny tale sasantsasany dia tapaka karama avokoa noho izany hono. Tena mahagaga ny raharaha! Aza manody ny tsy mandray karama amin’ny androm-petin’ny Krisimasy sy ny faran’ny taona toa izao. Fantatra ny fanjakana fa malemy ny osa ny Malagasy ankehitriny satria noana ka hararaotiny izany.
Jereo ange ny fahasahian’ny fanjakana Hery Rjaonarimampianina amin’ny fampijaliana ny Malagasy e ! Nasondrony ny vidim-bary tao anatin’ny telo volana izao ka niakatra 100%. Nampiakariny isam-bolana ny vidin-tsolika, nampidinina ny sandan’ny ariary ka tafakatra 4000 ariary ny “euro” ankehitriny raha toa ka 3500 ariary izany telo vola lasa izay. Niakatra ny vidim-piainana andavanandro ka izay afaka misakafo indray mandeha isan’andro dia isan’ny olona sambatra. Tsy tenenina intsony ny fandravana tranon’olona ka lazaina fa tany manan-tompo no ipetrahan’izy ireo hatramin’izay, nefa amidy amin’ny karana mpanefoefo sy ny sinoa mpanjanatany vaovao indray.Trano vaovao sy valo zoro ary manaka-danitra no solon’ny tranon’ny Malagasy mahantra nipetraka teo.
Tena mihantsy ady amin’ny vahoaka ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina raha toa ka ireo zavatra mahakasika ny vahoaka mivantana ireo no jerena. Soa ihany fa mbola hendry ny Malagasy ankehitriny, ka manaja filoha sy fanjakana toa izao. Niova tsy toa ny teo aloha intsony, ka nitroatra raha vao nisy zavatra tsy nety nataon’ny mpitondra firenena.
Fokontany Antetezana Afovoany: Trano manodidina ny 100 tafo ho ravana
Very fanahy mbola velona ny fianakaviana an-jatony isa monina eny amin’ny fokontany Antetezana Afovoany, ao anatin’ny boriborintany voalohany eto Antananarivo Renivohitra. Ireto farany izay tsy voaroaka tsy maintsy miala eo amin’ny toerana misy azy afaka andro vitsy satria misy olona iray no milaza ho tompon’ny tany ary hanangana fotodrafitrasa eo amin’io toerana io. Trano manodidina ny 100 tafo moa no voakasika amin’izany ary tsy maintsy ho ravana avokoa ireo trano ireo raha ny fantatra. Omaly no nidina teny an-toerana ny vadintany narahan’ny mpitandro filaminana, nampilaza ireo fianakaviana ireo amin’ny tokony hialan’izy ireo eo amin’io tany io.